အင်ျဂလနျအသငျးက ရကျဖို့ဒျကို ပှဲထှကျကစားသမားအနနေဲ့ အသုံးပွုသငျ့တာလဲ ? – the One Sports Journal
စကော့တလနျအသငျးနဲ့ ဂိုးမရှိသရကေခြဲ့ပွီးနောကျ ဂါရတျ ဆောကျဂိတျရဲ့ အသငျးက အုပျစုပထမနရောအတှကျ ခကျြ ရီပကျဘလဈကို အနိုငျကစားဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။ အင်ျဂလနျက အုပျစုပှဲစဉျ ( ၂ ) ခုမှာ သှငျးဂိုးတဈဂိုးသာ ရယူနိုငျခဲ့ပွီး စိတျပကျြစရာ တိုကျစဈစှမျးဆောငျရညျကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။
မနျနဂြောအနနေဲ့ တိုကျစဈကစားသမားတှရေဲ စှမျးဆောငျရညျကို ပွနျလညျဆနျးစဈဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။ ဖီးလျ ဖိုဒငျက အခြိနျအမြားစုမှာ ခွစှေမျးပွသနိုငျခွငျးမရှိသလို ခရိုအေးရှားနဲ့ ပှဲစဉျမှာ တဈလုံးတညျး‌သော အနိုငျဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့ ရာဟငျး စတာလငျကလညျး အုပျစုပှဲစဉျ ( ၂ )ခုလုံးမှာ အားနညျးခဲ့ပါတယျ။ အင်ျဂလနျက လကျရှိမှာ ( ၄ ) မှတျရထားပွီးဖွဈတဲ့အတှကျ နောကျတဈဆငျ့ တကျရောကျဖို့တော့ သခြောသလောကျရှိနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယခုပွိုငျပှဲမှာ အောငျမွငျမှု ရလိုပါက တိုကျစဈပိုငျးစှမျးဆောငျရညျပိုကောငျးလာဖို့ လိုအပျပါတယျ။
လူတိုငျးက ဂကျြ ဂရေးလဈကို ပွောဆိုနကေပြမေယျ့ ဆောကျဂိတျအနနေဲ့ အင်ျဂလနျအသငျး လိုအပျနတေဲ့ တိုကျစဈစှမျးဆောငျရညျကို ရရှိဖို့ မားကတျ ရကျဖို့ဒျ ကို အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။ အသကျ ( ၂၃ ) နှဈအရှယျ တောငျပံကစားသမားက စကော့တလနျနဲ့ ပှဲစဉျမှာ ( ၁၆ ) မိနဈပါဝငျခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ သူတှဲဖကျကစားသငျ့တဲ့ ဟယျရီကိနျးနဲ့ လူစားလဲခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ ဆောကျဂိတျအနနေဲ့ တောငျပံကစားသမားရဲ့ အမွငျ့မားဆုံး စှမျးဆောငျရညျကို ရရှိဖို့ ကွိုးစားသငျ့ပါတယျ။
ရကျဖို့ဒျက လကျရှိ အင်ျဂလနျအသငျးမှာ တိုကျရိုကျအကဆြုံး ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး ဘာမှမဟုတျတဲ့အနအေထားတဈခုကနေ သှငျးဂိုး ရယူပေးနိုငျတဲ့သူပါ။
စတာလငျးက နရောလှတျတှကေနေ တိုကျစဈဆငျရာမှာ ကောငျးမှနျပမေယျ့ ရကျဖို့ဒျလို ခံစဈကစားသမားတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျစှမျးမရှိပါဘူး။ နောကျပွီးသူက ဘယျခွမျးမှာ ယူနိုကျတကျတောငျပံကစားသမားလို လုချရှောနဲ့ အတှဲညီညီ ကစားနိုငျခွငျးမရှိပါဘူး။ ရကျဖို့ဒျက အင်ျဂလနျအသငျးနဲ့ မှတျတမျးကောငျးပိုငျဆိုငျထားပွီး ပမျြးမြှ ( ၁၁၇ ) မိနဈမှာ နိုငျငံအတှကျ သှငျးဂိုးတဈဂိုး ရယူထားနိုငျသူဖွဈပါတယျ။
မားကတျ ရကျဖို့ဒျက သှငျးဂိုးရယူပေးနိုငျရုံသာမက တိုကျစဈ ကူးပွောငျးရာမှာလညျး မြားစှာအထောကျအကူပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အင်ျဂလနျ နှငျ့ ဂါရတျ ဆောကျဂိတျတို့ဟာ ယခုပွိုငျပှဲမှာ အောငျမွငျမှုရလိုပါက မားကတျ ရကျဖို့ဒျကို အသုံးပွုဖို့လိုအပျတယျလို့ ယူဆမိကွောငျးပါ။ ။
အင်္ဂလန်အသင်းက ရက်ဖို့ဒ်ကို ပွဲထွက်ကစားသမားအနေနဲ့ အသုံးပြုသင့်တာလဲ ?
စကော့တလန်အသင်းနဲ့ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပြီးနောက် ဂါရတ် ဆောက်ဂိတ်ရဲ့ အသင်းက အုပ်စုပထမနေရာအတွက် ချက် ရီပက်ဘလစ်ကို အနိုင်ကစားဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလန်က အုပ်စုပွဲစဉ် ( ၂ ) ခုမှာ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးသာ ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး စိတ်ပျက်စရာ တိုက်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
မန်နေဂျာအနေနဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမားတွေရဲ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဖီးလ် ဖိုဒင်က အချိန်အများစုမှာ ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိသလို ခရိုအေးရှားနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ တစ်လုံးတည်း‌သော အနိုင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ ရာဟင်း စတာလင်ကလည်း အုပ်စုပွဲစဉ် ( ၂ )ခုလုံးမှာ အားနည်းခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန်က လက်ရှိမှာ ( ၄ ) မှတ်ရထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်တစ်ဆင့် တက်ရောက်ဖို့တော့ သေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှု ရလိုပါက တိုက်စစ်ပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းလာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လူတိုင်းက ဂျက် ဂရေးလစ်ကို ပြောဆိုနေကျပေမယ့် ဆောက်ဂိတ်အနေနဲ့ အင်္ဂလန်အသင်း လိုအပ်နေတဲ့ တိုက်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိဖို့ မားကတ် ရက်ဖို့ဒ် ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အသက် ( ၂၃ ) နှစ်အရွယ် တောင်ပံကစားသမားက စကော့တလန်နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ( ၁၆ ) မိနစ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် သူတွဲဖက်ကစားသင့်တဲ့ ဟယ်ရီကိန်းနဲ့ လူစားလဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောက်ဂိတ်အနေနဲ့ တောင်ပံကစားသမားရဲ့ အမြင့်မားဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ရက်ဖို့ဒ်က လက်ရှိ အင်္ဂလန်အသင်းမှာ တိုက်ရိုက်အကျဆုံး ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဘာမှမဟုတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေ သွင်းဂိုး ရယူပေးနိုင်တဲ့သူပါ။
စတာလင်းက နေရာလွတ်တွေကနေ တိုက်စစ်ဆင်ရာမှာ ကောင်းမွန်ပေမယ့် ရက်ဖို့ဒ်လို ခံစစ်ကစားသမားတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ နောက်ပြီးသူက ဘယ်ခြမ်းမှာ ယူနိုက်တက်တောင်ပံကစားသမားလို လုခ်ရှောနဲ့ အတွဲညီညီ ကစားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ရက်ဖို့ဒ်က အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပျမ်းမျှ ( ၁၁၇ ) မိနစ်မှာ နိုင်ငံအတွက် သွင်းဂိုးတစ်ဂိုး ရယူထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။
မားကတ် ရက်ဖို့ဒ်က သွင်းဂိုးရယူပေးနိုင်ရုံသာမက တိုက်စစ် ကူးပြောင်းရာမှာလည်း များစွာအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလန် နှင့် ဂါရတ် ဆောက်ဂိတ်တို့ဟာ ယခုပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုရလိုပါက မားကတ် ရက်ဖို့ဒ်ကို အသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆမိကြောင်းပါ။ ။